Kuphume nesinedolo emngcwabeni kaStix | Isolezwe
Kuphume nesinedolo emngcwabeni kaStix
Isolezwe / 21 January 2013, 2:44pm /
UNGCWATSHWE izolo uMnuz Nduduzo "Stix" Mdletshe obenguSihlalo weMKMVA ominze edanyini laseNanda emasontweni amabili edlule
UPHENDUKE umbuthano we-ANC umngcwabo kaMnuz Nduduzo “Stix” Mdletshe (40), (osesithombeni) obenguSihlalo wenhlangano yomakadebona bamasosha oMkhonto weSizwe ebiseCity Hall, eThekwini, izolo.
Khona abebebeke amatafula amakhulu ngaphandle bedayisa izimpahla ze-ANC. ngisho nomfundisi obephethe inkonzo ehholo ubebuye azwakale esencenga abaholi beqembu elibusayo abebekhona ukuthi benze obekwenziwa nguMdletshe basheshise uhlelo lokulethwa kwezidingongqangi zabantu. Uthe ngabantu abasemagatsheni abababeka ezikhundleni zokuphatha eMangaung ngoDisemba nyakenye.
Izinkulungwane zabantu ebezihambele umgcwabo bezicula amaculo omzabalazo, zikhuza iziqubulo, amasosha ehamba phansi ngezisu echaza umufi njengeqhawe ebelinesibindi.
Bekukhona nalowo owayengukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke, uMnuz Bheki Cele obekuthi uma kudlalwa iculo lo mzabalazo agide kakhulu.
Izikhulumi ebezishintshana zichaze uMdletshe njengomuntu obenakekela abaswele kunaye. Kuthiwa ubenza ngakho konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa imindeni nezingane zamasosha adonsa kanzima enhlanganweni esifundeni iJerome Langa Region.
UMvelo Mdletshe (16), indodana kamufi, ufanise ukufa kukayise njengokuwa kwensika yekhaya. Uthe impilo izoshintsha engasekho uyise ngoba ubeyiqhawe lawo wonke umuntu futhi ewuthanda umndeni wakhe.
“Ubeyikho konke kithina, esenzela konke esikudingayo futhi esiza nabanye abantu bakweminye imindeni. Ubewumuntu wabantu, egcwele imfundiso futhi enesibindi. Ubesesinde ezingozini zomgwaqo nangesikhathi edutshulwa kodwa ekugcineni wafa ngamanzi,” kuchaza uMvelo othe bayohlala bemkhumbula njalo uyise.
UMdletshe uminze edamini eNanda ngoJanuwari 6 kade bentweza ngesikebhe esisha ceke beqeda kuba nomhlangano nabanye abangani abahlanu. Sebephakathi nedamu kuthiwa bakhumula amajakhethi okubhukuda bagxumela emanzini kodwa uMdletshe wahlangabezana nobunzima esehluleka ukubuyela esikebheni waminza.
Umufi wazalelwa KwaMashu waya ekudingisweni eZambia, Zimbabwe naseTanzania ngo-1989. waqeqeshwa yinhlangano ukulwa nohulumeni wengcindezelo, waze wabuya ngo-1994. Uqokelwe esikhundleni ashone esiphethe ngo-2011.
Umufi ushiye emhlabeni umkakhe nezingane ezinhlanu nabazali bakhe. Ungcwatshwe emathuneni iHoroes Acre eChesterville.